ယာဉ်အို/ယာဉ်ဟောင်းအပ်နှံ အစားထိုးတင်သွင်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပါမစ်လျှောက်ထားမှု အပေါ် စိစစ် ဆောင်ရွက်မှုများနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ | Commerce
ယာဉ်အို/ယာဉ်ဟောင်းအပ်နှံ အစားထိုးတင်သွင်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပါမစ်လျှောက်ထားမှု အပေါ် စိစစ် ဆောင်ရွက်မှုများနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ
Thu, 04/11/2019 - 05:58 -- dotadmin
မော်တော်ယာဉ်ပါမစ်ထုတ်ပေးရေးဌာနစု (One Stop Services)
၁။ ယာဉ်အို/ယာဉ်ဟောင်းအပ်နှံ အစားထိုးတင်သွင်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပါမစ်လျှောက်ထားမှု အပေါ် စိစစ် ဆောင်ရွက်မှုများနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် -
(က) ပါမစ်လျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့်အချက်
(၁) လျှောက်ထားသူ၏ မှတ်ပုံတင် (သို့မဟုတ်) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကဒ် မူရင်းနှင့် မိတ္တူ၊
(၂) ကိုယ်စားလှယ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ပါက ကိုယ်စားလှယ်၏ မှတ်ပုံတင် (သို့မဟုတ်) နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးကဒ်မူရင်းနှင့် မိတ္တူ၊ Special Power (မူရင်း)၊
(၃) မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းကြာမြင့်ယာဉ်များအား ဖျက်သိမ်းပေးရေးနှင့် အစားထိုး ယာဉ် တင်သွင်းရေးအဖွဲ့၏ စိစစ်ထောက်ခံချက် ပုံစံ(ဃ)မူရင်း၊
( ၄) PROFORMA INVOICE (မူရင်း) ၊ Team and Conditions အချက် (၆) ချက်၊
(၅) PROFORMA INVOICE ပါ အချက် ( ၆ ) ချက်နှင့်အညီ တင်သွင်းပါမည်ဟု ကာယကံရှင် ၏ဝန်ခံကတိ၊
(၆) နိုင်ငံခြားငွေ ဘဏ်စာရင်းဖွင့်ထားသူ(သို့မဟုတ်)နိုင်ငံခြားငွေ ဘဏ်စာရင်း ဖွင့် ထားသည့် ကုမ္ပဏီမှ ယာဉ်လျှောက်ထားသူ၏ ယာဉ်ဖိုးငွေများ ပေးချေရန် နှစ်ဦးသဘောတူ နိုင်ငံခြားငွေသုံးစွဲခွင့် ဝန်ခံကတိ၊
၂။ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်း မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပါမစ်လျှောက်ထားမှု အပေါ် စိစစ်ဆောင်ရွက်မှုများနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် -
(၁) မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့်ပြုပါရန်ကာယကံရှင်၏ လျှောက်လွှာ ၊
(၂) လျှောက်ထားသူ၏ မှတ်ပုံတင်မူရင်းနှင့်မိတ္တူ ၊
(၃) ယာဉ်လျှောက်ထားသူ၏အိမ်ထောင်စုဝင်လူဦးရေစာရင်း(သန်းခေါင်စာရင်း) မူရင်း၊
(၅) လျှောက်ထားသူမှ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်း ခွင့်ပြုပါမစ်ထုတ်ပေးခဲ့သည့် စာရင်း တွင် မပါဝင်ကြောင်း ဝန်ခံကတိ၊
(၆) PROFOMA Invoice မူရင်း၊
(၇) PROFOMA Invoice မူရင်းတွင် Recondition လျှောက်ထားက သတ်မှတ်ပါ အချက် (၆) ချက်နှင့်အညီ တင်သွင်းလျှောက်ထားကြောင်း ဝန်ခံကတိ ၊
(၈) ကိုယ်စားလှယ်ဖြင့် လျှောက်ထားက ဌာနမှ ခွင့်ပြုပေးထားသည့် ကိုယ်စားလှယ် ကဒ် မူရင်းနှင့် မိတ္တူ၊ Special Power ၊ (မှတ်ချက်။ ၂၁-၂-၂၀၁၇ ရက်နေ့မှ စ၍ ကိုယ်စားလှယ် ဖြင့် လျှောက်ထားခွင့်မပြုပါ။)
၃။ ယာဉ်အို/ဟောင်း အပ်နှံအစားထိုး တင်သွင်းမှုနှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်း မော်တော် ယာဉ် တင်သွင်းမှု (အရောင်းစင်တာ / အရောင်းပြခန်း) ပါမစ်လျှောက်ထား ထုတ်ပေးမှု လုပ်ငန်းစဉ်အပေါ် စိစစ်ဆောင်ရွက်မှု များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် -
(က) လျှောက်ထားသူ၏ မှတ်ပုံတင် (နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြား) မူရင်း၊ သန်းခေါင် စာရင်း မူရင်း၊ မိတ္တူ (မှတ်ပုံတင်ပါအမည်၊ မှတ်ပုံတင်မှန်/မမှန်) ၊
(ခ) ကိုယ်စားလှယ်နှင့် လျှောက်ထားခြင်းဖြစ်က ဌာနမှခွင့်ပြုထားသော ကိုယ်စား လှယ်ကဒ် မူရင်း ၊ မိတ္တူ ၊
(ဂ) လျှောက်ထားသည့် Case တွင် Section တွင် ခွင့်ပြုထားသည့် စီးရေထက် ပိုမို လျှောက်ထားခြင်း မရှိပါကြောင်းနှင့် ပိုမို၍ ရောင်းချခြင်း မပြုပါကြောင်း ဝန်ခံကတိ ၊
(ဃ) လျှောက်လွှာတွင် မော်တော်ယာဉ်နှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များ၊ ဈေးနှုန်းများကို Section မှ ခွင့်ပြုထားသည့် Consingnment , Dealership ဈေးနှုန်းများ၊ အချက်အလက် များနှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိ/ မရှိ ၊
(င) ယာဉ်အို/ဟောင်း အပ်နှံအစားထိုး ပါမစ်ဖြစ်က မှတ်ပုံတင်သက်တမ်း ကြာမြင့် ယာဉ်များအား ဖျက်သိမ်းပေးရေးနှင့် အစားထိုးယာဉ် တင်သွင်းရေးအဖွဲ့၏ စိစစ် ထောက်ခံချက် ပုံစံ (ဃ) မူရင်း၊ (လျှောက်ထားသူ၏ အမည် ၊ မှတ်ပုံတင်နံပါတ် နှင့် ပုံစံ(ဃ) ပါ အမည်၊ မှတ်ပုံ တင် မှန်/မမှန်)
(စ) လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်း (Personal) လျှောက်ထားခြင်းဖြစ်က ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မှ လျှောက် ထားခြင်းအတွက် တိုင်းဒေသအစိုးရအဖွဲ့၏ စိစစ်ထောက်ခံ ခွင့်ပြုပါ အမည် မှန်/မမှန် စိစစ် ရပါသည် ၊
(ဆ) ထူးခြားတင်ပြမှုများစိစစ်တွေ့ရှိက EICC/ကြီးကော်သို့ တင်ပြခွင့်ပြုချက်ရယူ ပြီးမှ ဆောင်ရွက်ရန်၊
၄။ Show Room / Consignment / Dealership ပါမစ်များ လျှောက်ထားမှုအပေါ် စိစစ်ဆောင်ရွက်မှု များနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် -
(၁) ကုမ္မဏီ/ လူပုဂ္ဂိုလ်၏ တင်သွင်းခွင့်ပြုရန် လျှောက်လွှာ ၊
(၃) ယာဉ်လျှောက်ထားသူ၏အိမ်ထောင်စုဝင်လူဦးရေစာရင်း(သန်းခေါင်စာရင်း) မူရင်း ၊
(၄) ကုမ္ပဏီ/ အသင်းအဖွဲ့များ၏ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်မိတ္တူ ၊
(၅) ဘဏ်စာအုပ်မူရင်းနှင့်နှစ်ဦးသဘောတူသုံးစွဲခွင့်ထောက်ခံစာ ၊
(၆) ID မိတ္တူ (သွင်းကုန်ကြေငြာလွှာ)
(၇) Sectionမှ ထုတ်ပေးသောလိုင်စင်မိတ္တူ ၊
(၈) ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ (Special Power) ၊
(၉) ကိုယ်စားလှယ် မှတ်ပုံတင်ကဒ် ၊
(၁၀) နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီ/ ဖက်စပ်ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါက ကြိုတင်ခွန်မူရင်း/မိတ္တူ ၊
၅။ မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့် Permit များ ပြင်ဆင်/ အပ်နှံ/ သက်တမ်းတိုးခြင်းဆိုင်ရာ စိစစ် ဆောင်ရွက်မှုများနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် -
(က) လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်း မော်တော်ယာဉ် တင်သွင်းခွင့်ပါမစ် (Show Room/ Sale Centre အပါအဝင်) အား ပြင်ဆင်/ အပ်နှံခြင်း
(၁) ပြင်ဆင်/ အပ်နှံခွင့် လျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့် စာရွက်စာတမ်းများ၊
(ကက) ပြင်ဆင်/ အပ်နှံလိုသည့် အကြောင်းအရာ အပြည့်အစုံ ဖော်ပြထားသည့် ကာယကံရှင်၏ လျှောက်လွှာ၊
( ခခ ) ပါမစ်မူရင်းနှင့် မိတ္တူတစ်စုံ၊
( ဂဂ ) Invoice မူရင်း၊
(ဃဃ) ပြင်ဆင်သည် အချက်အလက်နှင့်လိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်း အထောက် အထားများ (eg. မှတ်ပုံတင်အမှတ် ၊ လူအမည်များ ၊ ပြင်ဆင်ခြင်း ဖြစ်လျှင် မှတ်ပုံတင်မူရင်းနှင့်မိတ္တူ ၊ လိပ်စာပြင် ဆင်ခြင်းဖြစ်လျှင် အိမ်ထောင်စု ဇယား မူရင်း နှင့်မိတ္တူ ၊ ဈေးနှုန်း ပြင်ဆင်ခြင်းဖြစ်ပါက ဘဏ်စာအုပ် မူရင်းနှင့် မိတ္တူ) ၊
( ငင ) ကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်းမဟုတ်ပါက ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ ၊
( စစ ) ကိုယ်စားလှယ်ကဒ်မိတ္တူ ၊
( ခ) ယာဉ်အို/ယာဉ်ဟောင်း အစားထိုးတင်သွင်းခွင့်ပါမစ် (Show Room အပါအဝင်) အား ပြင်ဆင်/အပ်နှံ/သက်တမ်းတိုးခြင်း
(၁) ပြင်ဆင် / အပ်နှံ / သက်တမ်းတိုးခွင့် လျှောက်ထားရာတွင်ပါဝင်ရမည့် စာရွက် စာတမ်း များ
(ကက) ပြင်ဆင်/ အပ်နှံ/ သက်တမ်းတိုးလိုသည့် အကြောင်းအရာ အပြည့်အစုံ ဖော်ပြ ထားသည့် ကာယကံရှင်၏ လျှောက်လွှာ ၊
( ခခ ) ပါမစ်မူရင်းနှင့် မိတ္တူတစ်စုံ ၊
( ဂဂ ) မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းကြာမြင့်သော ဖျက်သိမ်းယာဉ်ထောက်ခံချက် မိတ္တူ (ပုံစံ “ဃ” မိတ္တူ) ၊
(ဃဃ) ပြင်ဆင်သည့် အချက်အလက်နှင့် ပတ်သက်သည့် အထောက်အထားများ (eg. အမည်၊ မှတ်ပုံတင် အမှတ်များ ပြင်ဆင်ခြင်းဖြစ်လျှင် မှတ်ပုံတင် မူရင်းနှင့် မိတ္တူ ၊ လိပ်စာပြင်ဆင်ခြင်းဖြစ်လျှင် အိမ်ထောင်စုဇယား မူရင်းနှင့် မိတ္တူ၊ ဈေးနှန်း ပြင်ဆင်ခြင်းဖြစ်ပါက ဘဏ်စာအုပ် မူရင်းနှင့် မိတ္တူ ) ၊
( စစ ) ကိုယ်စားလှယ်ကဒ် မိတ္တူ ၊
(ဆဆ) Invoice မူရင်း ၊